Ode to Joy ကို ပြန်ဆိုကြည့်ခြင်း | ZAYYA
← ပစ္စုပ္ပန် ~ ပါရဂူ
ကဗျာရွတ်လို့ ထကြစို့ →
အဲ့ကျောင်းသားလေးဟာ အခုဆို အနှစ်သုံးဆယ်ကျော် တိုင်ခဲ့ပြီ။ ထားစို့— ဒီအချိန်မှာ ဒီတေးသွားကို အမှတ်တရ ပြန်တင်လိုပါတယ်။ အဲ့အချိန်က အဲ့ဒီတစ်ရက်ပဲ တွေ့ခဲ့ရတဲ့ အမည်မသိ ဦးလေးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခု “Ode to Joy” ဖြစ်ပါတယ်။
Ode to Joy Youtube Link
“အို အဆွေတို့၊ တခြားအသံတွေ မလို၊
“ကောင်းကင်ဘုံရဲ့ တောက်ပတဲ့ တန်ခိုး၊
အရှင့်ရဲ့ အခွင့်အောက် ကျွန်ုပ်တို့ လောင်ကျွမ်း၊
လူသားအားလုံး ညီရင်းနှမ ဖြစ်ကြ။”
“အရှင့် တောင်ပံနုနု လက်စုံအခတ်မှာ
စစ်မှန်နှစ်လိုဖွယ် ဇနီးမယားကို ပိုင်ဆိုင်။
စိတ်နှလုံး ရှိသော အရာတိုင်း
အကျွန်တို့ ဤသီချင်းမှာ ပါဝင်သီဆိုနိုင်ကြစေ။
ညွှန်နူးသော နှလုံးဖြင့် ဆိတ်ငြိမ်သွားကြစေ။”
မျှတသည် ဖြစ်စေ၊ မမျှတသည် ဖြစ်စေ
အရှင့်အနမ်း~ အကျွန်တို့အားလုံး ရရပါစေ။
ခိုင်မာသော တွဲလက်များဖြင့် ဆုံးခန်းတိုင်နိုင်ရပါစေ။”
လောကသုံးပါးအတွက် ဖြစ်စေလော့! “
“ညီနောင်တို့၊ ဤဝဠာပြင် ပျိုးပြက်ထက်ဝယ်
အထက်ဘုံတို့၌ အဖကို ရှာဖွေနိုင်ကြစေ။
နတ္ခတ်တို့အထက်ပါး အဖဘုရား နားနေနိုင်ပါစေ။”
Happy New Year for you, My Beloved. Lin Lin Latt
Dec 30th 2013 @7:18 PM
အခု ကဗျာတေးမှာ “နတ်ဘုံရဲ့ သမီးပျိုငယ်” ဆိုတာဟာ “Tochter aus Elysium” (Daughter of Elysium) ကို အလွယ်ဆိုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Elysium ဆိုတာ ဂရိဒဏ္ဍာရီလာ ကောင်းကင်ဘုံကို ရည်ရွယ်ပါတယ်။ နတ်ဘုရားတွေ ထာဝရ အသက်ပေးထားတဲ့ လူ့ပြည်က သူရဲကောင်းတွေ နေထိုင်ကြတယ် လို့ ဆိုကြတယ်။
ရှေးဂရိစာဆို ဟိုးမားရဲ့ ကဗျာတွေမှာ တွေ့နိုင်တဲ့ Elysium Plain ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာမြေအစွန်းတစ်နေရာက ပြည့်ဝတဲ့ ချမ်းမြေ့မှု လွှမ်းခြုံရာ မြေလို့ တင်စားကြပါတယ်တဲ့။ ကဗျာတစ်ခုလုံး ခြုံရင်း ကျနော် ဆီလျော်သလို ပြန်ချရေခြင်း သက်သက်ပဲမို့၊ လိုအပ်သည်များ ညံ့ဖျင်းသည်များ ရှိပါက သည်းခံကြပါကုန်။